Seth Curry, hama Steph kukakavara, achiita Reese Witherspoon anetseka - vanhu - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Seth Curry, Hama Steph vakakavadzana, vachiita Reese Witherspoon vachitya - vanhu
Seth Curry ave achigara mumumvuri wehama yake huru.
The Blazers uye akava nemukana wokutiza. China manheru, Steph Curry neVarriors vakagumburwa ndokupwanya mapurisa ePortland anonzi 17 mumutsara we 114-111 mumutambo 2.
STEFI: CHINHU CHINHU CHINOKUDZIDZA
Munguva yemutambo, hama dzaCrry dzakachengetana, izvo zvaifanira kuva zvinonetsa zvikuru kuna Sonya naDell Curry, avo vaivapo.
Mutori wenhau reese Reese Witherspoon akati akanzwa zvakanaka kuna Sonya, uyo akanga asina mumwe anopikisana naye kuti amutevere.  Ndinonzwa ndakamanikidzwa kutarisa @ StephenCurry30 et
Amai vaSeth Curry vanoona vanakomana vake vachirwisana. #GSWvsPOR #brothervsbrother
- Reese Witherspoon (@ReeseW) I17 May 2019
Usiku hunopisa hwaSeti (4 pa 7 pa 3) aimbova Raiders nyanzvi Charles Woodson akazununguswa zvishomanana.
Mira kweminiti: stefu naSeti, kuputirana hama kana stefu uye kuuraya, ndine kuvhiringidzika
- Charles Woodson (@CharlesWoodson) the 17 May 2019
Netminder Spencer Dinwiddie naMina Kimes weESPN vanoti chiduku chehama hachisi kuseka.
Seti anonyatsonaka nokunyengedza kune rimwe chete Curry
- Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) iyo 17 May 2019  Seth inozviitira hama nehanzvadzi dzechidiki pasi rose
- Mina Kimes (@minakimes) I17 May 2019
Vanhu vazhinji vakanga vachingofadzwa chete naSeti, uyo akanga aparadza vana vake vakuru, kunyange zvazvo Blazers vake vakatora kurasikirwa.
OMG! Ndipi mutsanana. Ndipi mutsanana. Uye ndinoziva izvozvo @ StephenCurry30 Anoita chinhu chake, asi ini ndinozvikudza zvikuru nehanzvadzi Seth. Uyu mwana akasiya ibhenji ndokurova dzimwe mimwe 3'a. Kunoita kuti vanhu vazvirumbidze usiku huno
- Stephen A Smith (@stephenasmith) the 17 May 2019
Ndeipi mutambo unofadza weWarriors / Blazers. Ndiri kufara kwazvo naSeeth Curry - murume uyu akabhadhara mari yake.
- Bill Simmons (@BillSimmons) I17 May 2019
Mutambo wechitatu uchaitwa musi weMugovera usiku muPortland uye sezvo uchiri kutaridzika kune vakoma vadiki, Seti ari kurwira kuti arege kurasikirwa nehupenyu hwake neHarriors, kusvika kune mbiri kubva kune imwe maitiro ekupedzisira kweNBA.